Nbudata Boeing 747-400 Aerolineas Argentinas FSX - Rikoooo
downloads 12 313
Project Opensky (POSKY), repaints site Luke Powell, ụda site Emil Serafino Obere
Boeing 747-400 na agba nke Aerolineas Argentinas, igwe mara mma nke batara site na Hiroshi Igami. Ederede atọ ahụ kwekọrọ na Boeing 747 atọ edebara aha ụlọ ọrụ ahụ: LV-ALJ, LV-AXF na LV-BBU. Anwụrụ anwụrụ ọkụ bụ nke ndabara FSX B747 na ụda bụ ndị sitere na ezigbo 747 General Electric CF6-80C2B5F
Aerolíneas Argentinas (Na obodo ntà: AR, ICAO: ARG) bụ mba ụgbọelu nke Argentina, privatized na 1990s site ọchịchị nke Carlos Menem (Justicialist Party, PJ). Ọ na-nationalized na September 2008 n'okpuru ọchịchị nke Cristina Kirchner (Front maka Victory-PJ), ihe Argentine ikpe ka jụrụ ọ bụla ụgwọ na Spanish ike Marsans, azụmahịa nwe.
The ike na-nwere ndị enyemaka Austral Lineas Aereas, nwere on anụ ụlọ flights, nke na-nationalized na 2008.
Aerolineas Argentinas na-atụ anya na-esonyere ndị SkyTeam njikọ aka na ga-abụ nanị ụlọ ọrụ dị na South America. Nkwekọrịta ga-mara ọkwa na October 2010 maka nbanye nime ha jikọọ aka na 2011 ma ọ bụ 2012. (Isi Iyi: Wikipedia)
Onye edemede: Project Opensky (POSKY), repaints site Luke Powell, ụda site Emil Serafino Obere